Warshadda Suunka Taleefanka Shiinaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Soo jiidashada taleefanka, suunka taleefanka gacanta, suunka taleefanka wax kasta oo aad raadinayso, waxaad hubtaa inaad ka heli doonto mid ka mid ah warshadeena. Waxaa lagu heli karaa walxo kala duwan, dhammaad, midabyo & qalab.
Waxaan ku takhasusay soo saaridda suunka taleefanka gacanta waxaanna dhoofineynay adduunka oo dhan tobanaan sano, midka aan ku sameynay baaxad weyn oo laga heli karo cabbirro kala duwan, naqshado iyo qaabab kala duwan. Waxaan u fidineynaa naqshado caadooyin tayo sare leh taleefannada gacanta macaamiisha adduunka oo dhan, ha ahaato naqshad caadi ah ama moodada ah waxaan kaa caawin karnaa dhammaystirka. Waxaan ku siinnaa xulashooyinka Jadwalka Midabka Pantone iyo agabyada si aad u abuurto xargaha taleefankaaga gacanta.
Suumanka taleefanka gacanta ayaa ku habboon taleefannada gacanta, mp3/4 ciyaartoy, kamarad, furaha furaha iyo aalado kale, kuwaas oo leh dalool ama loop. Suun waara oo raaxo leh oo aad ku sudhi karto curcurkaaga, ka ilaali aaladdaada inay si lama filaan ah hoos ugu dhacdo oo aaladdaada badbaado markaad isticmaaleyso, sidoo kale u oggolow suulkaaga inuu u safro gees ilaa gees, si dhakhso leh oo fudud ayaad u rakibi kartaa. Waxaa jira qaabab badan oo soojiidasho leh oo la heli karo, sida jilayaal figurine ah oo yar yar, qurxinta barafka ee rhinestone, iyo jilicsanaanta xayawaanka ee agabyada kala duwan. Soojiidashada qaarkood xitaa way shidmi karaan ama iftiimin karaan marka taleefanku soo dhaco. Soojiidasho badan ayaa sidoo kale leh gambaleel yar oo ku lifaaqan ama jilayaal ka yimid franchises -kii ugu dambeeyay ee caanka ahaa, sida xiddigta caanka ah ee caanka ah ama fiidiyaha kulul xitaa cayaaraha, in ay u noqon karto xulasho wanaagsan ninka iyo naagta qurxinta iyo inay noloshooda heer sare ka ahaadaan, waxaa kaloo jira qaar ka mid ah soojiidashada oo laga yaabo in midkood farta saaro si uu u nadiifiyo aaladda aaladda. Marka wax kasta oo fikirkaagu yahay, ku soo dhawow inaad nala wadaagto oo waxaan ka dhigi doonaa xaqiiqda.
Waxyaabaha: PVC dabacsan, silikoon, maqaar, deegaanka-saaxiibtinimo oo aan sun ahayn
Style: Qaabab kala duwan oo aad dooratay ama caado u ah naqshad kuu gaar ah.
Qalabyada: Xarigga taleefanka gacanta, giraanta qaabka D, rivet, clip aargoosatada iyo 2 siddo oo bood ah.
Xargaha taleefanka ayaa kulul oo ku fiican ganacsiga, kor u qaadista, xayaysiinta, xusuusta, isboortiga iyo dhacdooyinka.
Hore: Khaanadaha Qalinka & Kiisaska Qalinka
Xiga: Nadiifiyaha Shaashadda Taleefanka
Suunka gacanta Iphone
Suunka Soojiidashada Telefoonka
Suunka Qabashada Taleefanka
Suunka Loop Phone
Kiisaska Dhegaha ee Silikoon